လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီး မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် လူနေအိမ် ၁၀၀ ကျော် ပျက်စီးမှုများအား ကူညီဆောင်ရွက် ~ Myanmar Online News
လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီး မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် လူနေအိမ် ၁၀၀ ကျော် ပျက်စီးမှုများအား ကူညီဆောင်ရွက်
3:19 AM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်အတွင်း မေ ၆ ရက်မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲခန့်တွင် လေပြင်းများတိုက်ခတ်ပြီး မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ရှိ လူနေအိမ် ၁၀၆ လုံး၊ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(မြောက်အရပ်)၊ ကျောက်မှော်ဘုန်းကြီး ကျောင်းတို့သည် အမိုးများလွင့်စင်ပျက်စီးမှုနှင့် ဖောင်တော်ဦးစေတီ ငှက်ပျောဖူးနေရာမှကျိုးပဲ့၍ ထီးတော် မြေခခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပျက်စီးသွားသည့် နေရာများသို့ နယ်မြေခံတပ်မတော်သားများက မေ ၇ ရက် နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု မရှိကြောင်း တပ်မတော်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
▼ 2020 (3285)
COVID-19 ကူးစက်မှု လျော့ကျသွားတဲ့ နေရာတွေမှာ ဒုတိယ...
ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အဆ...
လှိုင်သာယာ ချန်းရီဖိနပ်စက်ရုံက စကားပြန် ကိုဗစ်ပျော...
ယနေ့နံနက်ပိုင်း COVID-19 ထပ်တိုးလူနာမရှိ ဗိုင်းရပ်...
မြန်မာနိုင်ငံတွင်Covid-19 အတည်ပြုလူနာ (၂၀၃)ဦးအထိရှ...
မူဆယ်မြို့နယ်၊ မန်ဝိန်းဂိတ်အနီး၌ ဒီတိုနေတာများ တင်...
COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ Antibody စစ်ဆေးရာတွင် အ...
COVID-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် သီးသန့်စေ...
ပြည်တော်ပြန်များကို တို့ဖတ်နမူနာများယူကာ စစ်ဆေးသွာ...
ကချင်ပြည်နယ်တွင် သိန်း ၈၀၀၀ခန့်ရှိမူးယစ်ဆေး ဝါးမျာ...
ဇူလိုင် ၂၁ရက်တွင် အထက်တန်းကျောင်းများ စတင်ဖွင့်မည်...
တွေးဆချက်သက်သက်များကိုဖြန့်ဝေနေသည်ဟု အမေရိကန်ကို တ...
မန္တလေးမှာ စာစစ်တာဝန်ကျတဲ့ ဆရာ/ဆရာမတွေကို အသွားအလာ...
ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း (၉) ပြည်နယ်ရောက် မြန်မာ...
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းအဖြစ် အထက်တန်းပြ ဆရာ၊ဆရာမ ငါးသောင...
ထိုင်းနိုင်ငံအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ (NSC) မှ တ...
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအဖြေလွှာများ ဇ...
Mask မတပ်လျှင် အရေးယူထားသည့် ဒဏ်ငွေများကို COVID-1...
ချက်နိုင်တွင် အခြေခံပညာကျောင်းများ ယနေ့ပြန်လည်ဖွင့...
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် မြောက်ဦး ယူနက်စကိုလုပ်ငန်းမျ...
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ အပြီးတိုင် ရုတ်သိ...
Covid-19 ကူးစက်မှု ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း ရှင်ဥပဂု...
အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ယနေ့အထိ Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့...
ရန်ကုန်နှင့်နေပြည်တော်မှ COVID-19 ထပ်တိုးလူနာ(၂)ဦး...
ကမ္ဘောဇဘဏ်က ဒေါ်တင့်တင့်လွင်အပေါ် တရားစွဲဆိုထားသည့...
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ခရီးစဉ် ဇူလိုင်လတွင်စတ...
မန်လီရွာသားတစ်ဦးကို ရှမ်းနီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က သေနတ်...
မြန်မာနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါ ပြည်တွင်းနေပြည်သူအချ...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ထပ်မံကူးစက်ခံရသူ ...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေကျင်မြို့နယ် လယ်ယာမြေစီမံခ...
ကျိုင်းတုံ ကိုဗစ်လူနာ အမှတ် ၆၄ ယနေ့ထိ Positive ဖြစ...
ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဒီမိုကရေစီအရေး ဆန္ဒပြသူများကိ...
AA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သည်ဆိုသော ရသေ့တေ...
မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ (၁၂၈) ပါတ...
လားရှိုးနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ အလေးချိန် (၃၅)ကီလိုတင်ဆ...
ပါကစ္စတန်မှာ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တစ်စင်း ပျက်ကျမှုကြော...
ကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်လိုက် ပျောက်လိုက်နဲ့ ပိုးတွေ...
ရွှေမြန်မာတို့ရဲ့ ပထမဆုံး မြန်မာသံရုံးနှင့်ထိုင်းအ...
ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ချင်းပြည်နယ်မှ မလေးရှားပြန် CO...
ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ ICJ တရားရုံးကို မြန်မာတင်မည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်Covid-19 အတည်ပြုလူနာ (၂၀၁)ဦးအထိရှ...
ဖွင့်ပြီး နာရီပိုင်းအကြာမှာ ပြန်ပိတ်ခဲ့တဲ့ တောင်ကိ...
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး စောင့်ရှောက်ထားသော ပြည်ပပြန်...
ပျက်ကျတောင်ကိုရီးယားလေယာဉ် ရှာဖွေရေး မြန်မာနဲ့တောင...
Yangon Water Bus ပိုင်ရှင်ဒေါ်တင့်တင့်လွင်အား စီးပ...
မန်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ပြန်လ...
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်အား စုစု ပေါင်းထောင်ဒဏ်အနှစ်၃၀ချမ...
"တပ်မတော်ကို ခင်ဗျားပြောချင်တာ ဂျီနီဗာကွန်ဗန်းရှင်...
‘ဝ’ဒေသသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် လာရောက်ရန် ...
COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားနေခြင်းကြောင့် နိုင်...
လက်နက်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ကျပ်ဘီလီယံနှင့်ချီ၍ ဖမ်းမ...
Sex Education သင်ခန်းစာပါ အသုံးအနှုန်းများကို ပြန်...
မန္တလေးတွင် COVID-19 ဓာတ်ခွဲခန်းပြီး၊ ယူနန်မှ ကျွမ...
လမ်းမတော်က သူနာပြုစာသင်ဆောင်ပြိုကျမှု စုံစမ်းစစ်ဆေ...
မိုင်းတုံမြို့နယ်၌ ဆက်ကြေးကောက်သည့် RCSS(SSA) အဖွဲ...
COVID-19 လူနာ တပ်မတော်သား ၁ ဦး ရောဂါပျောက်ကင်း
ရေဝင်နစ်မြှပ်သွားသော ဝိုင်အက်ဖ်စီကုမ္ပဏီပိုင် ချယ်...
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ် ဒဏ်ရာရလူနာများနှင့် သေဆုံးသူမျ...
ဂျပန်ရောက်မြန်မာများ အထူးထောက်ပံ့ကြေးငွေ ယန်း ၁ သိ...
COVID 19ကာလအတွင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့ စားသောက်ဆိုင်တ...
တာချီလိတ်က Covid-19 ဒုတိယမြောက်လူနာ နှစ်ကြိမ်ဆက် ပ...
အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့ ဒေါက...
မန္တလေးမြို့ရှိ စားသောက်ဆိုင်နှင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မ...
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို ယခင်ကထက် ၆....
အိမ်အကူမိန်းကလေးအား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ သရုပ်ဆောင...
Covd-19 ကူးစက်ရောဂါကို အနံ့ခံနိုင်ရန် ဂျာမန်သိုးထိ...
ပုသိမ်တွင် Quarantine ဝင်နေသည့် သတင်းထောက် ၂ ဦးအပါ...
သတင်းတု၊ သတင်းမှားများ ပျံ့နှံ့နေမှု ကိုင်တွယ်ဖြေရ...
စမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ပါက COVID-19 ကာကွယ်ဆေး တစ်ဘီလီယ...
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးစီး၍ ကျင်းပပြ...
ICJ ၏ ကြားဖြတ် စီမံဆောင်ရွက်ချက် ချမှတ်ခြင်းဆိုင်ရ...
ရွှေဘိုမြို့ရှိ KBZ ဘဏ်ခွဲ ၁မှ ကျပ်တစ်သောင်းအုပ်တွ...